Musande Petro, Musande Petro ne Mikeroni - Wikipedia
Musande Petro, Musande Petro ne Mikeroni
Msande Petro kana Sando Pitero ndiro guta guru rekuunganidzwa kweFuranzi mhiri kwemakungwa kweMusande Petro ne Mikeroni, kumahombekombe echitsuwa cheKanadha cheNyufaundilendi. Musande Petro ndiyo ine vanhu vakawanda pamakomini maviri (makanzuru) anoumba Musande Petro ne Mikeroni.
Iyo nharaunda ye Musande Petro inoumbwa neChitsuwa cheMusande Petro chakakodzera uye akati wandei zvitsuwa zvidiki zviri pedyo, zvakaita se Chitsuwa cheVakwasvi (L'Île-aux-Marins). Kunyangwe iine ingangoita 90% yevagari veMusande Petro ne Mikeroni, iyo nharaunda yeMusande Petro diki zvakanyanya pane iyo musha we Mikeroni-Lan'iledhi (Miquelon-Langlade), iri kuchamhembe kwakadziva kumadokero paChitsuwa cheMikeroni.
Iyo huru yekugara uye chigaro chevanhu chiri kuchamhembe kwechiteshi chengarava chinonzi Bharachwa (Barachois), chakatarisana neGungwa re Atirandiki, pamhenderekedzo yekumabvazuva kweSaint-Pierre Island. Muromo wechiteshi chengarava unorindwa neketani duku yezvitsuwa.
Jacques Cartier akatora zvitsuwa zvacho zvaiva zveFuranzi muna 1536, pashure pokunge zvawanikwa nevaPutukezi muna 1520. Pakapera Hondo Yemakore Manomwe muna 1763, zvitsuwa zvacho zvakaendeswa kuBhuritani, ndokuzodzorerwa kuFuranzi muna 1816.
Musande Petro yaiva nzvimbo yekunze yakashandiswa naAl Capone kutakura doro kubva kuKanadha kuenda kuAmerika panguva yeProhibition.
Kusvika 1945, pakanga paine nharaunda yechitatu muMusande Petro ne Mikeroni: Chitsuwa cheVakwasvi. Uyo musha we Chitsuwa cheVakwasvi wakatorwa nekomisheni ye Musande Petro muna 1945.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Musande_Petro,_Musande_Petro_ne_Mikeroni&oldid=93103"
This page was last edited on 31 Kurume 2022, at 15:58.